အကောင်းဆုံး Disc ဘရိတ် caliper အပိုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သူနှင့် စက်ရုံ |KTG
သင့်ကားအတွက် နှစ်များတစ်လျှောက် သင်ရရန် လိုအပ်သော အစားထိုး အစိတ်အပိုင်းများစွာ ရှိပြီး ဘရိတ်ကာလီပါများသည် သေချာပေါက် ၎င်းတို့ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ဘရိတ်ကာလီပါမပါရင် ဘယ်ယာဉ်မှ ရပ်တန့်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။KTG သည် စျေးကွက်နောက်ရောင်းချမှုအတွက် ဘရိတ်အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်သည်။အားလုံးKTG Aftermarket ဘရိတ် Caliperမူလ OE အစိတ်အပိုင်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် သတ်မှတ်ချက်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။
KTG Brake caliper အပိုပစ္စည်းများအကြောင်း ပိုမိုသိရှိနားလည်ရန်။
KTG AUTO သည် caliper များကို ထောက်ပံ့ပေးရုံသာမက ပြုပြင်ရေးကိရိယာများလည်းပါရှိပါသည်၊ အပိုပစ္စည်းအများအပြားပါရှိသည်- caliper ပစ္စတင်၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ caliper mounting bracket၊ brake rubber bushing၊ caliper mounting bolt kit၊ caliper pad clip kit၊ brake caliper ပြုပြင်ရေးကိရိယာ။ကျွန်ုပ်တို့တွင် စျေးရောင်းစျေးဝယ် ဘရိတ်ကာလီပါနှင့် ဘရိတ်ကာလီပါအစိတ်အပိုင်းများအတွက် OE နံပါတ် 3,000 ကျော်ရှိသည်။ဘရိတ် caliper သို့မဟုတ် catalogue ဆိုင်ရာ သီးခြားစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများအတွက် ဆက်သွယ်ပါ။sales@ktg-auto.comအသေးစိတ်နှင့်အတူ။
ဘရိတ် Caliper Phenolic Piston
ဘရိတ် Caliper သံမဏိ Piston
ဘရိတ် Caliper Pad Clip Kit
ဘရိတ် Caliper Mounting Bolt Kit
ဘရိတ် Caliper Actuator
ဘရိတ် Caliper ပြုပြင်ရေး Kit လုပ်ဆောင်ချက်များ
ဘရိတ်ကယ်လီပါ ပြုပြင်ရေးကိရိယာများသည် အလုပ်လုပ်သောအရည်များ ယိုစိမ့်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများကို အခမဲ့ခရီးသွားလာစေရန် သေချာစေသည်။ပစ္စတင်များကို ဘရိတ်အုပ်များထံသို့ ဘရိတ်တွန်းအား တိုက်ရိုက်ပို့လွှတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။အလုံပိတ်ကွင်းများသည် ပစ္စတင်နှင့် ဆလင်ဒါကြားမှ အရည်များ ယိုစိမ့်မှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။လမ်းညွှန်လက်စွပ်များသည် caliper နှင့် brake pads များ၏ရွေ့လျားမှုကိုသေချာစေသည်။ဖုန်မှုန့်ဖိနပ်များသည် အစုအဝေးများကို အညစ်အကြေးနှင့် အစိုဓာတ်မှ ကာကွယ်ပေးပြီး အဆီပြန်ခြင်းကို ထိန်းသိမ်းရန်လည်း လုပ်ဆောင်ပေးသည်။Hold-down springs များသည် သင့်လျော်သော ဘရိတ်အဖုံးများ အနေအထားကို သေချာစေပြီး မောင်းနှင်နေစဉ် ၎င်းတို့၏ တုန်ခါမှုကို တားဆီးပေးသည်။ဘရိတ်ကာလီပါဒြပ်စင်များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့် ချောဆီပေးခြင်းသည် ပြုပြင်မှုကိရိယာတွင် စည်းကမ်းအတိုင်းပါဝင်သည့် အထူးအေးဂျင့်များ လိုအပ်သည်။
မကြာခဏဆိုသလို၊ ဘရိတ်ကာလီပါချို့ယွင်းမှုသည် ၎င်း၏ရွေ့လျားနေသောအစိတ်အပိုင်းများ- လမ်းညွှန်တံများနှင့် ပစ္စတင်များကို ပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ဤဒြပ်စင်များ၏ ချို့ယွင်းချက်များ၏ အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။၎င်းတို့ထဲမှ အဖြစ်အများဆုံးမှာ-
1. ဖုန်မှုန့်များ ဖိနပ်ပေါက်ပြဲခြင်း။၎င်းတို့၏ ကြံ့ခိုင်မှုကို ပျက်စီးစေသောကြောင့် ဘရိတ် caliper ရွေ့လျားနေသော ဒြပ်စင်များသည် အစိုဓာတ်၊ ဖုန်မှုန့်များနှင့် ရောနှောထားသော ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့သည်။နောက်ဆုံးတွင်၊ ၎င်းသည် အစိတ်အပိုင်းများ ယိုယွင်းမှုနှင့် ယိုယွင်းမှုကို ဖြစ်စေသည်။
2. မသင့်လျော်သောအဆီအသုံးပြုခြင်း။လမ်းညွှန်တံများကို ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် လစ်သီယမ် သို့မဟုတ် ဂရပ်ဖိုက် ချောဆီများကို မသုံးပါနှင့်။၎င်းတို့၏ ပါဝင်ပစ္စည်းများသည် ရော်ဘာဒြပ်စင်များအပေါ် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။၎င်းတို့သည် လမ်းညွှန်တံများ၏ ပျော့ပျောင်းမှုကို ဆုံးရှုံးစေကာ ဖောင်းကားလာပြီး လမ်းပြတံများကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် လျှောကျစေသည်။
3. ဘရိတ်ဆီ အစားထိုးလဲလှယ်မှု နှောင့်နှေးခြင်း။၎င်း၏မြင့်မားသောရေစုပ်ယူနိုင်စွမ်းကြောင့်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းမှုတွင်ရေပမာဏသည်အချိန်နှင့်အမျှတိုးလာသည်။၎င်းသည် ပစ္စတင်များ၏ အတွင်းပိုင်း သံချေးတက်ခြင်းကို အားပေးသည်။ယာဉ်၏ကြာရှည်သိုလှောင်မှုသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် အလားတူအကျိုးဆက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
ဘရိတ်စနစ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် လမ်းညွှန်တံများနှင့် ပစ္စတင်များ၏ အခြေအနေအပေါ် တိုက်ရိုက်မူတည်သည်။ထို့ကြောင့် ချို့ယွင်းချက်များရှိပါက ဘရိတ် caliper ကို ချက်ချင်းပြုပြင်ပါ။သင့်လျော်သော ပြုပြင်ရေးကိရိယာကို ဝယ်ယူခြင်းသည် အကျိုးကျေးဇူးအရှိဆုံး ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။၎င်းတွင် သင့်အား ငွေနှင့် အချိန်ကို သက်သာစေသည့် စည်းဝေးပွဲအား ပြန်လည်ရယူရန် သင်လိုအပ်သမျှ ပါဝင်သည်။
ယခင်- TOYOTA COROLLA/ MATRIX PONTIAC VIBE အတွက် အနောက်ဒစ်ဘရိတ် ကာလီပါ
Semi Loaded Caliper ပုံသေ Caliper ဘရိတ် Pads Discs နှင့် Calipers ကုန်ကျစရိတ် Teal Brake Calipers Caliper Saab Jak ဘရိတ် Caliper